Akụkọ - Kedu otu esi ahọrọ ezigbo ihe nkwụnye ihe na-agbanwe agbanwe?
Kedu otu esi ahọrọ ezigbo ihe nkwụnye ihe na-agbanwe agbanwe?
1. Kedu ihe a ga-atụle mgbe ị na-azụ ihe ntanetị na-agbanwe agbanwe na ntanetị? Kedu otu esi eme nhọrọ ziri ezi?
Purchasezụ ahịa n'ịntanetị nke ihe nkwụnye ihe ọkụkụ na-agbanwe agbanwe pụtara na a zụrụ ngwaahịa na weebụsaịtị ụlọ ọrụ. Ya mere, enwere ụfọdụ ihe dị mkpa ma ọ bụ akụkụ dị mkpa ka a tụlee. Ọzọkwa, ọ bụrụ na ọ metụtara ịzụta ngwaahịa ahụ, ọ bụ ihe dị mkpa ma dị mkpa, nke a ga-elekwasị anya. Ya mere, ọ dị mkpa ịtụle ihe ndị ahụ, dị ka mmalite ngwaahịa a, nkọwa na ụdị, nha, oke, ogo ngwaahịa na ọnụahịa, yana onye nrụpụta.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ inwe nhọrọ dị mma, ịkwesịrị ime isi ihe abụọ na-esonụ: nke mbụ, ịkwesịrị ịme ụfọdụ ọrụ ịkwadebe tupu ịzụta ngwaahịa, ka ị nwee ike ịmata ihe ị maara; nke abụọ, mgbe ị na-azụ ngwaahịa, ị kwesịrị ị na-echebara ihe niile dị mkpa echiche, ma ị ga-enwerịrị ntụle zuru ezu, ka ị nwee ike ịnwe ezi uche. Enwere ike nweta isi ihe abụọ dị n'elu.
2. Ndị na-emepụta ihe eji agbanwe ihe ntanetị chọrọ ụfọdụ asambodo?
Ndị na-emepụta ihe ndị na-agbanwe agbanwe na-achọ ịrụ ọrụ ụfọdụ asambodo, n'ihi na ọrụ a nwere ike iweta ụfọdụ uru, dị ka ịkwalite asọmpi nke ndị nrụpụta na ngwaahịa ha na ahịa, yana ịbawanye uru akụ na ụba nke ndị nrụpụta. Ya mere, ọ dị mkpa iji ọrụ a kpọrọ ihe. Na mgbakwunye, enwere ụzọ abụọ metụtara njikwa mma.
3. Kedu ihe achọrọ na ihe ndị bụ isi maka ihe nkwụnye ihe ọkụkụ na-agbanwe agbanwe?
Ihe na-agbanwe agbanwe nke na-agbanwe agbanwe, nke nwere ụfọdụ ihe achọrọ na ngwaahịa dị mkpa, bụ: obere ike ike nke akụrụngwa, ụdị dị iche iche na nkọwapụta, ụgwọ sistemụ dị ala, ọtụtụ ihe eji arụ ọrụ. N'ihe banyere ọnọdụ ọrụ, enwere ike ịrụ ọrụ ya ma ọ bụ na-aga n'ihu, ụgwọ ọrụ ahụ dị obere ma ọrụ ahụ dị mfe ma dịkwa mma. Na ngwa, a pụrụ iji ụdị ihe nkwụnye a n'ọtụtụ ebe. Maka ndị na-emepụta ya, enwere ike ịkwado ogo ngwaahịa ma nwee ike ịhazi ngwaahịa ahụ ka achọrọ.
Post oge: Sep-25-2020